पतनको बाटोमा सरकार - फ्रन्टलाईन नेपाल
पतनको बाटोमा सरकार
२९ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १७:४३ June 12, 2020 फ्रन्टलाईन नेपाल Comment(0)
मानिसलाई रिस त्यतिबेला उठ्छ जतिबेला उसको अहंकारलाई ठेस लाग्छ । र, उसको अहंकारलाई ठेस तब लाग्छ जब उसलाई आफ्नो हैसियत थाहा हुँदैन । संबैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दै, बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउनेहरुलाइ दमन गरेर सत्ताधारीले आफ्नो औकात प्रस्तुत गरेका छन् ।
मैले देखेका आन्दोलनहरुमा टायर बल्थे, रेलिङ भाँचिन्थे, टेलिफोन बुथ जल्थे, ढुङ्गा हानिन्थे, गाडी तोड्फोड हुन्थे, टाउको फुटाइन्थे । अहिलेको आन्दोलन हेर्दा ति सबै केहि छैनन् । छन् त केवल नारा बोकिएका कागज, मौन आवाज, साथमा छाता, अनि सचेत मन ।
गणतन्त्रमा बिरोध गर्न पाइन्छ । बिरोध गर्न पाइने अधिकारको रक्षा नै गणतन्त्रको मुल मर्म हो । कुनै पार्टीको झन्डा र राजनैतिक एजेण्डा बिना जनता सडकमा आउछन् भने, सत्ताधारीले गम्भिर रुपमा सोच्नै पर्छ । एउटा पुस्ता सचेत छ जसले कांग्रेस, कम्युनिस्ट र नानाथरी होइन । जनता भएर सोच्न थालेको छ । जनता जनार्दन हुन् । देश जनताको नाम हो ।
भागवत गितामा भनिएको छ
हिंस्र: स्वपापेन विहिंसित: खल:
साधु: समत्वेन भयात् विमुच्यते
अर्थात्, हिंस्रक स्वभाववाला दुष्टरपापी आफ्नै पापले नष्ट भै समाप्त हुन्छ, अनि सज्जन चरित्रवान पुरुष समता र ममताको स्वभावद्वारा भयदेखी विमुक्त हुन्छ ।
जिम्मेवार ठानिएकाहरु चिल्लो कोट लगाएर चिल्ला गाडीमा दौडिन्छन् । बेलाबेला अन्टसन्ट बक्दिन्छन् । अस्पतालको आइसियुमा मुसाहरु दौडिन्छन् । पिपिइ, टेस्ट कीट्, भेन्टिलेटर अनि दक्ष जनशक्ति अभाव छ । अर्थतन्त्र ध्वस्त छ । कर थर्काएरै मागिएको छ । सरकारी राहत कुन चरिको नाम हो कसैलाइ थाहा छैन ।
क्वारेन्टिन सेन्टरहरु हिटलरका ग्यास च्याम्बरलाई जित्ने खालका छन् । कोरोनाको प्रभावले भन्दा बेरोजगारी र मानसिक तनाबले आत्महत्या गर्नेहरू बढिरहेका छन् । भ्रष्टाचार दिन दुई गुणा रात चौगुणा बढेको छ । यी सवै विषयमा आवाज उठाउनेलाइ सरकारको बिरोध किन गरिस् ? भनेर हनुमानहरु स्पष्टिकरण माग्छन् । सरकार आफै दमन गर्न थाल्छ ।
पतनको संघारमा हिटलर सामान्य मनस्थितिमा थिएनन् । उनको साम्राज्य ध्वस्त हुँदै थियो । र, त्यो भन्दा धेरैअघि उनको मस्तिष्क । यो कतै पढिएको थियो, अहिलै भोग्दै छौं । यो पतनको मार्ग हो ।
५ चैत्र २०७४, सोमबार १३:२७ March 19, 2018 फ्रन्टलाईन नेपाल
रोशनी भट्टराई/फ्रन्टलाइन नेपाल काठमाडौं, चैत ५ – राजधानीमा हालै सम्पन्न हिमालयन किङ्डम नेप्लिज फेडेरेसन अफ बडिबिल्डिङ एन्ड फिट्नेसको अध्यक्षमा शिव लामिछाने विक निर्विरोध निर्बाचित भएका छन् । संघको पहिलो साधारण सभाले लामिछानेको अध्यक्षतामा २६ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति समेत चयन गरेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशव विष्टको प्रमुख आतिथ्य तथा हिमालयन किङ्डम […]
२८ बैशाख २०७६, शनिबार ११:१० May 11, 2019 फ्रन्टलाईन नेपाल
काठमाडौं, २८ वैशाख । दिल्ली क्यापिटल्सलाई ६ विकेटले पराजित गर्दै चेन्नई सुपर किङ्स इण्डियन प्रिमियर लिगको फाइनलमा पुगेको छ। शुक्रबार भएको खेलमा टस जितेर चेन्नईले पहिले बलिङ् गर्ने निर्णय गरेको थियो। चेन्नईले हालसम्म सात पटक आईपिएलको फाइनल खेलिसकेको छ जसमा ३ मा उसले जित हासिल गरेको छ। दिल्ली हालसम्म एकपटक पनि फाइनलमा पुगेको छैन। पहिले […]
अब स्वास्थ्य जानकारी एपमा आउँदै
२१ फाल्गुन २०७५, मंगलवार ११:२९ March 5, 2019 फ्रन्टलाईन नेपाल
काठमाडौं , फागुन २० । काठमाडौँ – तपाइँलाई सञ्चो भएन ? आफन्तलाई स्वास्थ्य सस्थामा लैजानु पर्‍यो अथवा दुर्घटना परेकालाई तत्काल नजिकको स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुर्‍याउनु पर्‍यो ? कुन अस्पताल जाने-लैजाने, कुन चिकित्सकलाई देखाउने कस्तो सेवा लिने ? कुन कुन सेवा कुन कुन अस्पतालबाट पाइन्छ भन्नेमा अन्योल हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता नलिनुहोस् । आफ्नो मोबाइलमा यससम्बन्धी विस्तृत जानकारी […]
तिमी समुद्र बनिदेउ